मोदीले नाम लिएपछि सन्दीपले पाउलान् त खेल्न? उनीसँगै दिल्लीका ६ खेलाडीको आइपिएलमा शून्य खेल :: PahiloPost
मोदीले नाम लिएपछि सन्दीपले पाउलान् त खेल्न? उनीसँगै दिल्लीका ६ खेलाडीको आइपिएलमा शून्य खेल
12th May 2018, 05:06 pm | २९ बैशाख २०७५
काठमाडौं : नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आज काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गरेको छ। नागरिक अभिनन्दनपछि मोदीले नेपाली र हिन्दी भाषामा गरेको सम्बोधनमा नेपालको उल्लेख्य तारिफ गरे भने विकास निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाउने बताए। मोदीको लामो सम्बोधनको अन्त्यमा उनले इन्डियन प्रिमियर लिगको विषय समेत उल्लेख गरे।
उनले नेपाल पनि आइपिएलमा जोडिएको सन्दर्भ सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए। यसपटकको आइपिएलमा नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने दिल्ली डेयरडेभिल्समा आवद्ध छन् भलै उनले मैदानमा आफ्नो खेल देखाउन पाएका छैनन्। दिल्ली आइपिएलको स्कोर टेबुलमा सबैभन्दा पुछारमा छ र अब बाँकी सबै खेल जित्दा पनि दिल्ली कहीँ पुग्दैन।
दिल्ली डेयरडेभिल्समा भारतीय कम्पनी जिएमआरको लगानी छ। जिएमआर नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका लागि सक्रिय कम्पनी हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाए पनि लगानी जुटाउन यो कम्पनी असफल भइरहेको छ। सन्दीपको दिल्ली डेयरडेभिल्समा अप्रत्यासित रुपमा भएको इन्ट्रीलाई 'कर्पोरेट पोलिटिक्स' मान्नेहरु पनि उत्तिकै छन्।
मोदीको सम्बोधनले खेल्न पाउलान् त?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्बोधनको भारतमा राजनीति महत्व बेग्लै छ। कर्नाटक निर्वाचनको मौन अवधिमा मोदीले नेपालबाटै मन्तव्यहरु दिए। सम्पूर्ण प्रचार संयन्त्र र मिडियाको ठूलो सञ्जाल नै बोकेर तीर्थयात्रामा आएका मोदीविरुद्ध नेपाली जनमत सकारात्मक छैन। नाकाबन्दीका कारण भारतविरोधी धारणा नेपालीबीच सामान्यरुपमा स्थापित भएको छ। त्यसमाथि भारतीय कम्पनीले जलविद्युत आयोजना होल्ड गरेर पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। यस्तै पृष्ठभूमिमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने चयन भएका हुन्।
सन्दीप लामिछाने दिल्लीको टिममा अटाएपछि आइपिएलको क्रेज नेपालीबीच थप बढ्न पुगेको छ। नेपाली खेलाडीको म्याच हेर्ने प्रतीक्षामा रहेका दर्शकहरु करिब करिब निराश हुने अवस्थामा पुगेकै बेला मोदीले आज सन्दीप लामिछानेको विषय उठान गरे। के मोदीको तीर्थयात्राका क्रममा कर्पोरेट पोलिटिक्स र स्पोर्टस पोलिटिक्स पनि प्रवेश गर्छ? आइपिएलका अबका खेलमा सन्दीपको उपस्थितिले त्यसको जवाफ दिनेछ।
असफल यात्राको साक्षी
दिल्ली आइपिएलको यस श्रृंखलामा सबैभन्दा पुछारमा छ। कूल ६ अंकसहित अन्तिम स्थानमा रहेको दिल्लीले ११ खेल खेलिसकेको छ। ११ खेलमा ३ जित र ८ हारले उसलाई आइपिएलको यस सिजनबाट अनौपचारिक हिसाबले बाहिर पुर्‍याइसकेको छ। अब बाँकी खेल 'इज्जतका' लागि मात्रै हुने निश्चित छ।
आइपिएलका यसअघिका कुनै पनि खेलमा सहभागी हुन नपाएकाले सन्दीप लामिछानेका लागि भने अबका कुनै पनि खेल महत्वको हुनेछ। अब दिल्लीले ३ खेलमात्र खेल्नेछ। त्यसैले बाँकी खेलमा सहभागी हुन पाउनु नै उनका लागि सफलता मान्नुपर्ने अवस्था छ।
सन्दीपजस्ता दिल्लीका ६ खेलाडी जो मैदान छिरेनन्
दिल्ली टीममा रहेर मैदानमा आफ्नो खुवी देखाउन नपाउने सन्दीप लामिछाने एक्लै भने होइनन्। यसर्थ, सन्दीपलाई मात्र खेल्न नदिएको भन्न मिल्दैन। उनीबाहेक ५ जना खेलाडी पनि आइपिएलमा ११ खेल सकिँदा दर्शकभन्दा बढी हुन पाएनन्, भलै उनीहरुले दिल्लीका खेलाडीहरुसँग अभ्यास जारी राखे।
सन्दीपसँगै जयन्त यादव, मन्जोत करला, जुनियर डाला, सायन घोष रगुरुक्रित मन्न सिंहले ११ खेलमा कुनैमा पनि सहभागिता जनाउन पाएनन्। खेल्न नपाउनेमा लामिछाने र डाला भने दिल्लीले लिएका विदेशी खेलाडी हुन्। बाँकी विदेशी सबै खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिइसके।
मोदीले नाम लिएपछि सन्दीपले पाउलान् त खेल्न? उनीसँगै दिल्लीका ६ खेलाडीको आइपिएलमा शून्य खेल को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।